11 months, 2 weeks ago 2829 Qoodi
Waraana garee ABUT (TPLF) waliin godhamaa jiru ilaalchisee waamicha naannoon Amaaraa godhe fudhatee loltoota humna addaa gara iddichatti akka bobbaase mootummaan naannoo Oromiyaa beeksiseera.
Hogganaa Waajjira Komunikeeshinii Naannoo Oromiyaa kan ta'an Obbo Getaachoo Baalchaa yaada miidiyaa 'Al Ain'f kennaniin, "naannicha fi ummatichi kana kan godhu itti gaafatamummaa biyya tiksu waan qabuufi" jedhan.
Lola ji'oottan saddeetiif gaggeeffaman booda mootummaan Federaalaa labsii waraana dhaabuu labsuun raayyaan ittisa biyyaa naannoo Tigraay keessaa akka ba'u gochuun isaa kan yaadatamudha.
Loltoonni mootummaa federaalaa ba'u isaani hordofee humnoonni ABUT magaalaa Maqalee dabalatee magaalota adda addaa to'ataniiru. Guyyaa kaleessas bakkeewwan Koram, Allaamaaxaa fi Maaytsabrii jedhaman to'annoo isaani jala galfachuu beekameera.
Kana hordofee naannoon Amaaraa ibsa har'a laateen, "Humnoonni ABUT naannoo Raayyaa Allaamaaxaa, Koram fi Baallaa, Tsogbij, Zaataa, Abargallee, Walqaayit fi Maaytsabriitti weerara lammaffaa narratti baneera, kanaafuu ittisuurra gara haleelutti darbeera," jedhe.
Lola kanaafis naannolee biroof waamicha kan taasise yoo ta'u hanga ammaatti mootummoota naannoo Oromiyaa fi Sidaamaa waamicha kana fudhachuun loltoota isaani erganiiru. Loltoota meeqa akka ergan garuu kan ibsame hin jiru.
oromiyaa Waraana Tigraay TPLF
Nov. 2, 2020, 10:42 a.m.
Gullisootti namoonni nagaa haala 'suukkanneessaan ajjeefaman' - MNO